Showing posts with the label स्वान्त सुखाय:
सञ्जय मित्र सर्जकहरूको जहिले पनि चिन्ता हुने गर्दथ्यो, फुर्सद भएन। फुर्सदको अभावले केही कुरा लेख्न पाइएन, केही कुरा पढ्न पाइएन। समय नपाएर वास्तवमा चाहेजस्तो सिर्जना हुन सकेको छैन। पत्रिकाले वा फलानो विशिष्ट व्यक्तिले वा विशिष्ट ठाउँबाट रचनाको माग आएपछि तोकिएको समयको अन्तिममा बल्लतल्ल मिलाएर यस्सो एउटा पठाउन भ्याएको थिएँ। आदि आदि। सधैं कामको मारामार र चापाचापमा अध्ययन र सिर्जनाको लागि समय नै नपाइने गुनासो अलिखित वा लिखित दुवै माध्यमबाट अभिव्यक्त भइरहन्थे। अलिखित माध्यमबाट अझ बढी आउँथ्यो। आफूले पढ्न चाहेर पनि पढ्न नपाएको कृति फलानो हो, तपाईंले भ्याउनुभयो भने अवश्य पढ्नुहोला। मैले पढेका सबै कृतिमध्ये फलानो सर्वोत्कृष्ट ठानेको छु, एकचोटि अवश्य पढ्नुहोला भनेर सिफारिशहरू भइरहन्थे। तर समय जहिले पनि अपुग हुने गर्दथ्यो। समय अपुग हुनु चाहिं व्यस्तताको परिचायक हो। सार्थक व्यस्तताले सर्जकलाई निरन्तर ऊर्जा दिइरहन्छ। त्यहीं ऊर्जाबाट सिर्जनकर्मको परिचय बन्दछ। सामान्य दिनचर्याको रचना यसै कारण सामान्य हुँदाहुँदै पनि विशिष्ट हुन्छन् र कम समयमा आफ्नो मस्तिष्कलाई अत्यधिक बढी उपयोग गर्ने
सञ्जय मित्र यदि परम्परा र शास्त्रहरूलाई आधार मान्ने हो भने अहिले विक्रम संवत् २०७७ हो र विक्रम संवत् २०७६ को समाप्ति करीब तीन हप्तापहिले नै भइसकेको छ। वास्तवमा विक्रम संवत्को नयाँ वर्ष चैत शुक्ल प्रतिपदादेखि हुन्छ। यस वर्षको चैत शुक्ल प्रतिपदा गत चैत १२ गते नै थियो। विक्रम संवत्मा हरेक महीनाको पहिलो दिनलाई सङ्क्रान्ति भनिन्छ। यसरी हरेक महीनाको पहिलो दिन सङ्क्रान्ति हुने भएकोले १ गतेलाई त्यस महीनाको सङ्क्रान्ति मानिएको हो तर वास्तवमा सङ्क्रान्ति भनेको हरेक महीनाको शुक्ल प्रतिपदा हो। चन्द्रमासमा महीनाको गणना सजिलो होओस् भनेर पूर्णचन्द्र अर्थात् पूर्णिमाको दिनको भोलिपल्टबाट मान्ने गरिएको पाइन्छ। पूर्णिमाको भोलिपल्टदेखि कृष्ण पक्ष शुरू हुन्छ र पन्ध्र दिनपछि शुक्ल पक्ष शुरू हुन्छ। कृष्ण पक्षको अन्तिम दिन चन्द्रमा अलिकति पनि उदाउँदैन भने शुक्ल पक्षको अन्तिम दिन रातभर चन्द्रमा आकाशमा रहन्छ। कृष्ण पक्षको अन्तिम दिनलाई औंसी र शुक्ल पक्षको अन्तिम दिनलाई पूर्णिमा भनिन्छ। शास्त्रहरूमा कृष्ण पक्षलाई वदी र शुक्ल पक्षलाई सुदी भनिएको पाइन्छ। नेपालमा पनि विक्रम संवत्लाई आधिक
सञ्जय मित्र बालबालिका हरेकको घरमा छन् । बालबालिका नभएको पनि कुनै घर हुन्छ त ? र बालबालिकाले आफ्ना अभिभावकबाट धेरै कुरा सिक्छन्। बालबालिकाले अभिभावकबाट धेरै कुरा सिक्छन् भन्ने कुरोमा विश्वास छ ? बालबालिकाको नजरमा आफ्ना पिता र माता संसारका सबैभन्दा ठूला वा पूज्य हुन्छन्। बुबाआमाले नै देउतालाई पनि चिनाउँछन्। घरमा देउताप्रति श्रद्धाभाव राख्न र आमाबुबाका साथै आफूभन्दा ठूलाको आदर गर्न सिकाउँछन् । को किन आदरणीय भन्ने प्रश्नको उत्तर बालबालिकाले सबैभन्दा बढी आबाबुबाबाटै सिक्छन्। कुनैपनि बालबालिकालाई उनका आमा वा बुबा बेइमान छन्, ठग छन्, चोर वा बदमाश छन् भन्दा पक्कै हृदयमैं चोट लाग्छ। सकेसम्म प्रतिकार गर्छन् र नसक्ने अवस्थामा आफ्नो आक्रोश वा पीडालाई मनमा दबाएर आफूलाई निरीह पाउँछन् । यस प्रकारका कुराले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा साँच्चै कस्तो प्रभाव पर्छ होला भन्ने विषयमा हामीले कहिले सोच्ने गरेका छौं। आफ्नाअगाडि खेलिरहेका वा पढिरहेका वा आफ्नै धुनमा व्यस्त रहेको बेला आफ्ना सन्तानको अनुहारमा हेर्दै आफूले आफ्नो हृदयलाई प्रश्न गरौं त, के वर्तमानमा तिनीहरूप्रति न्याय गरेका छौं ? के साँच्चै हा
सञ्जय मित्र आजसम्म पनि साहित्यसिर्जनामा सामान्यतया दुुई धार छन्। एउटा धारले साहित्य जीवनको लागि र अर्को धारले साहित्य मनोरञ्जनको लागि हुनुपर्ने तर्क गर्दछन्। र जुन धारको साहित्य भएपनि यथार्थ प्रस्तुत गर्दछ। यथार्थको प्रस्तुतिलाई कतिपयले काल्पनिक रङ दिन्छन् त, कतिपयले आप्mनै यथार्थ हो भन्नेजस्तो पारेर प्रस्तुत गर्दछन्। अझ साहित्यमा वर्तमान त बोलेकै हुन्छ, वर्तमानले साहित्यमा आधिपत्य जमाएकै हुन्छ। साहित्य, कला र संस्कृतिलाई मानव मात्रको सम्पत्ति मानिएको छ। अहिले मानव समुदाय एउटा अकल्पनीय महामारीबाट गुज्रिरहेको छ । हरेक व्यक्तिको मनमा डर छ। मानव समुदाय संवेदनशील बनेको छ। गम्भीर संवेदनशीलताको यस घडीमा साहित्य सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो। अझ घरमा नै बस्नुपर्ने नैतिक तथा सामाजिक दायित्वले गर्दा सर्जकको मन र मस्तिष्कलाई झङ्कृत बनाएको छ। जब सर्जक संवेदित हुन्छ, तब सिर्जना हुन्छ। सिर्जनाको प्रकाशन विभिन्न माध्यमले गर्दछ। वर्तमान विश्वलाई पनि सिर्जनामा उतारेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा सर्जकहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो एक किसिमले तात्क्षणिक आत्मप्रकाशन नै हो। कोरोनाविरुद्
सञ्जय साह मित्र अति आवश्यक कामबाहेक घरबाट ननिस्कन सरकारको सल्लाह सार्वजनिक भएकै दिन देशभरका विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको छ । देशका करीब सम्पूर्ण शिक्षालय बन्द छन् । शिक्षालयहरू अप्रत्याशित बन्द भएका होइनन्। सरकारले चैत ५ गतेसम्म विद्यालय तहका सम्पूर्ण परीक्षा सम्पन्न गर्ने निर्देशन दिएको थियो र चैत ६ गतेदेखि हुने एसइई परीक्षासमेतलाई रोक्दै देशभरका क्याम्पस तथा विद्यालयहरू औपचारिकरूपमैं बन्द गर्ने निर्णय पनि आयो । देशमा भीडभाड हुने अन्य कामहरूमा पनि करीब रोक लगाइएको अवस्था छ । क्याम्पस पढिरहेका विद्यार्थीहरू तथा विद्यालय तहका बालबालिकाहरू घर फर्केका छन् र फर्किरहेका छन् । शहर बजारमा चहलपहल कम हुँदै गएको अवस्थामा बालबालिकाहरू गाउँतिर वा आआप्mनो घरतिर थन्किने अवस्था आइरहेको छ । एकजना महिला अभिभावकले एकजना शिक्षकसमक्ष आप्mनो दुःखेसो पोख्छिन्– कसरी एक महीनासम्म बच्चालाई घरमा राख्ने होला ? अवस्था यस्तो आइसकेको छ कि मामाघर पनि पठाउन सकिन्न र घरमा दिनभर राखिरहन निकै गा¥हो छ । वास्तवमा विद्यालयमा ६ घण्टाको लागि जाँदा अभिभावकहरूले सबै कुरामा विद्यालयले नै राम्रो गरि
घुम्टो प्रथा र...
सञ्जय साह मित्र नेपाल सांस्कृतिक विविधताको सङ्ग्रहालय पनि हो । यहाँ अनेक किसिमका संस्कृति एकै धर्म, सम्प्रदाय तथा जातका मानिसबीच रहेको छ । भौगोलिक दूरी, शिक्षा, नदी तथा लामो कालखण्डसम्म सम्पर्क हुन नसक्नु, सञ्चार, यातायात, सामाजिक सञ्जाल आदिका कारण संस्कृतिमा परिवर्तन, हस्तक्षेप तथा नयाँ संस्कृतिको निर्माण र चलनमा पार्थक्य आउने गर्दछ । नेपालमा प्रचलित संस्कृतिहरूको अध्ययन गर्ने हो भने एउटै संस्कृतिमा पनि विविधता पाइन्छ । संस्कृतिको विविधताभित्र एकता पाइन्छ । यी तथ्यहरूले पनि यस देशलाई संस्कृतिको सङ्ग्रहालय बनाउन सहयोग पु¥याएका छन् । देशमा भौगोलिक कारणले गर्दा तीन किसिमको संस्कृतिको निर्माण भएको छ – हिमाली, पहाडी र मधेसी । मधेसी संस्कृति भन्नु चाहिं देशको भूगोलको दृष्टिकोणले तराई भनिने क्षेत्रमा प्रचलित संस्कृतिको त्यो समष्टि हो जसलाई यहाँका रैथाने मान्दछन् । मधेसी संस्कृतिको आप्mनै विशेषता छ । आप्mनै विविधता छ । वास्तवमा मधेसी संस्कृति महिलाप्रधान छ । महिलाविना यो संस्कृति अधूरो र अपूरो छ । मधेसी संस्कृतिको विविधतामध्ये परम्परादेखि नै चलिरहेको घुम्टो पनि एक हो । घुम्ट
सञ्जय साह मित्र यस वर्षको होलीको हल्ला नै फिक्का भएको छ । होलीलाई उमङ्ग र उत्साहको निर्बन्ध पर्व मानिन्छ । यसमा रमाइलोको कुनै सीमा हुँदैन । आप्mनो सीमा र बन्धन अर्थात् मर्यादाभित्र होली स्वच्छन्द पर्व हो । यसले खान र पिउनमा कुनै किसिमको सम्झौता गर्दैन । यस पर्वमा आप्mनो स्वास्थ्यले साथ दिने सीमासम्म पुगेर मानिसले खानपानको स्वाद र सन्तुष्टि लिन्छन् । पर्वहरूमा यो यस्तो पर्व हो, जसमा खानपानको दृष्टिले एक वर्षमा सबैभन्दा उत्कर्ष होओस् र अर्को वर्षको भन्दा अझ एक कदम अगाडि रमाइलो होओस् भन्ने चाहना हुन्छ । यस पर्वले बालकदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्ममा उल्लास थप्छ । वास्तवमा वसन्त आएको मनमा अनुभूति थप्छ । होलीको समयमा आफन्त र नजीकका मानिसहरू एक ठाउँमा भेला हुन्छन् । रङ्ग हाल्छन् र अबिर दल्छन्। कतिपयले रङ्गलाई छालाको स्वास्थ्य राम्रो हुने र कतिपयले छालालाई हानि गर्ने दुई ध्रुवको विचार पोख्छन् । अबिरको सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन्छ । कतिपयलाई रङ्ग र अबिरको एलर्जी हुन्छ । कतिपयलाई होलीमा निर्बन्ध हुने खानपानले हानि गरेको पनि पाइन्छ । होलीको दिन वा भोलिपल्ट अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको सङ्ख
सञ्जय साह मित्र संसार गतिशील छ । संसारको ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा निरन्तर प्रगति भइरहेको छ । प्रगति भन्नु पनि गति नै हो । जहाँ कुनै स्थिरता रहन्छ भने त्यहाँ कुनै प्रगति पनि रोकिएको हुन्छ भन्दछन् । तर यसले राजनीतिक स्थिरतालाई समेट्दैन । यसमा पनि विवाद होला तर सामान्य मान्यता के छ भने राजनीतिक स्थिरताले अन्य धेरै कुरामा गतिशीलता ल्याउँछ । यदि राजनीतिक अस्थिरता भयो भने धेरै किसिमको गतिशीलता कम हुन्छ । फेरि राजनीति र सरकार केही फरक हुन सक्छ । यस अर्थमा कुनै देशको राजनीतिक वातावरण अस्थिर हुँदा वा नहुँदाको परिस्थितिलाई छोडेर समाजमा हुने परिवर्तनलाई विचार गर्ने हो भने सामाजिक परिवर्तन भन्नु चाहिं गतिशीलता हो । कतिपयले दोहोरो चरित्र देखाउँछन् । एकातिर समाजमा विकास र परिवर्तन चाहन्छन् र अर्कोतिर परिवर्तन भयो भने पहिलोको समाज राम्रो थियो भन्दछन् । पहिले नै समाजमा परिवर्तन हुनुहुन्न भन्दैनन् । समाजमा भइरहेको परिवर्तन म रोक्न चाहन्छु भन्दैनन् । समाजमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्ने र परिवर्तन हुनुभन्दा पहिलेको समाज राम्रो थियो, अहिलेको समाज बिग्रियो भन्ने रोदन कतिपय प्राज्ञिक व्यक्तिले
सञ्जय साह मित्र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूले स्पष्ट केही पनि भन्दैनन् तर पतौराको भग्नावशेषले स्पष्ट नभन्ने सबैलाई चुनौती दिइरहेको छ । नजीकै सिम्रौनगढ रिसाइरहेको छ । सिम्रौनगढले यस क्षेत्रकै इतिहास खोलेको छ । अलि परको ईशनाथ महादेव मन्दिरले पनि इतिहास बोलेकै छ । तर मौलापुर नगरपालिकाको पतौराबारे सबैतिर किन मौनता ? इतिहासले भन्छ – इस्वी सन् १०९७ मा डोय राज्यको स्थापना भएको थियो । दक्षिण भारतको कर्नाट देशबाट आएका नान्यदेवले सिम्रौनगढलाई राजधानी बनाई डोय राज्य स्थापना गरेका थिए । नान्यदेव दक्षिण भारतका चालुक्य शासकका सेनापति थिए । सेनापति नान्यदेवले डोय राज्यको स्थापना गरेका थिए । डोय राज्यमा नान्यदेवपछि गङ्गदेव, गङ्गदेवपछि नरसिंहदेव, रामसिंह देव, शक्तिसिंह देव, भूपालसिंह देव तथा हरिसिंह देवले शासन गरेको इतिहास छ । दिल्लीका बादशाह गयासुद्दीन तुगलकले डोय राज्यमा आक्रमण गरी ध्वस्त पारेपछि डोय राज्यका सातौं राजा हरिसिंह देव आप्mनो राज्य छाडी भागेका थिए । हरिसिंह देवले शासन छोडी भागेपछि तुगलकले कामेश्वर ठक्कुरलाई शासक नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि ठक्कुर वंशको पनि शासन चलेको पाइन्छ
सञ्जय साह मित्र यहाँ मधेसलाई सङ्कुचित अर्थमा लिइएको छ । यस आलेखमा मधेस भन्नाले प्रदेश २ लाई सम्बोधन गरिएको हो । नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा मधेसले निकै सजगतापूर्वक गर्दै आएको छ । समग्र देशमैं मोफसलबाट पहिलो पत्रिका निकाल्ने यहींको वीरगंज हो । त्यो सम्भवतः साहित्यिक पत्रिका थियो । तर अहिले वीरगंज साहित्यिक पत्रिकाविहीन छ । यस प्रदेशमा नेपाली साहित्यको सबै विधाले फल्ने–फुल्ने मौका पाएको छ । समग्र नेपाली साहित्यको विशिष्ट सेवा गरेको छ । अनेक मापनहरूले यसलाई पुष्टि गरेका छन् । यस प्रदेशको साहित्य सिर्जना स्तरीय छ र त नेपाली मानक साहित्यिक पत्रिका, साहित्यकार तथा भाषासेवामा यो प्रदेशले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ – प्रज्ञा आधुनिक नेपाली गजल कृतिलाई । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हालै यो कृति प्रकाशन गरेको छ । यस कृतिका दुई सम्पादक छन् – डा. घनश्याम न्यौपाने परिश्रमी र गोपाल अश्क । डा. परिश्रमी वीरगंजमा नौ वर्ष बसेर प्राध्यापनसँगै साहित्य सेवा गर्ने व्यक्तित्व हुन् भने अश्क वीरगंजकै हुन् अर्थात् यस कृतिको सम्पादन यस प्रदेशले गर्ने मौका पाए